အလွန်ရှေးကျတဲ့ မျိုးနွယ်ဝင်တွေရဲ့ ကျေးဇူး ? ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:15 PM | No မှတ်ချက် | Htoo Htoo Lay Online စာအုပ် အရောင်းဆိုင်
အခုခေတ် လူသားများ ( အများစု ) ကိုးကွယ်ကြတဲ့ ဘာသာကြီးပေါင်းဟာ အမှန်တော့ ၁၁ ခု ရှိပါတယ် ။ ကမ္ဘာ့အရှေ့ပိုင်းမှာ ကွန်ဖြူရှပ်ဝါဒ
/ တာအိုဝါဒနဲ့ ရှင်တိုဘာသာ ။ အာရှတောင်ပိုင်းမှာတော့ ဟိန္ဒူဘာသာ ဂျိန်းဘာသာ
ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဆစ်ခ်ဘာသာ ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသက ဂျူးဘာသာ / ခရစ်ယာန်ဘာသာ / အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ဇိုရိုအက်စတာ ဆိုပြီး အသီးသီး ပေါ်ထွန်းခဲ့ကြပါတယ် ။ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လူသားတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအခန်းကဏ္ဍ ပါဝင်ခဲ့ခြင်းဟာ ငြင်းဆိုနိုင်စရာမရှိတဲ့ အဖြစ်ပျက်ကြီး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ရှေးဟောင်း သုတေသနနဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းများက အထင်အရှားသက်သေခံထားကာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူမျိုးတိုင်းမှာ ဘယ်လောက်ရှေးကျတဲ့ မျိုးနွယ်စုပင် ဖြစ်စေကာမူ ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှု တစ်မျိုးမျိုးရှိတက်တာကို တွေ့ကြရမှာဖြစ်တယ် ။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူ ဘုရင်တစ်ပါးက သူ့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာကို ဘုရားသခင်ထံမှ ရရှိတယ်လို့ ဆိုခြင်းမျိုးဟာ အလွန်ရှေးကျတဲ့ လူမျိုးစုရဲ့ ထူးခြားသော သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ် ။ ရောမ အင်ပိုင်ယာ တည်ထောင်ရာမှာ
ခေါင်းဆောင်လုပ်သူက သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားသခင်မှ ဆင်းတက်လာသူဖြစ်ပြီး သူ့ကိုပဲ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်နိုင်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို သူတို့ရဲ့ ဘဝ အဖုံဖုံကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ဖို့ကတော့ ဘာသာရေးဟာ သော့ချက် တစ်ခုအဖြစ် နေရာယူထားပါတယ် ။ ၂၀ ရာစုရဲ့ ဒုတိယ ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့ ယနေ့အခြေအနေမှာ ဘာသာရေးရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ဘယ်လို ရှိနေမလဲ ? အချို့ကတော့ အခု ယဉ်ကျေးမှုမှာ ဘာသာရေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍက အရေးပါတဲ့ နေရာကနေ လျော့ကျသွားကာ သေတော့အံ့ဆဲဆဲ ဖြစ်နေပြီလို့ ဒီလိုသုံးသပ်သူတွေလဲ ရှိနေကြပါတယ် ။ ဘာသာတရားအားလုံးဟာ အတူတူပင် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြသူတွေလဲ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ ။ ဒါတွေကတော့ သာမန် အပေါ်ယံလေးကို ကြည့်ပြီး ပြောကြတယ်လို့ပဲ ဒီလို မှတ်ယူရမှာပါ ။ ဘာသာတရားတို့ဟာ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များမှာသာ မတူကွဲပြားတာမဟုတ်ပဲ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်နိုင်အောင် ကျင့်ကြံရမဲ့ လမ်းကြောင်းများဟာလဲ တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး ကွာခြားလွန်းလှပါတယ် ။ အချို့ ဘာသာတရားရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်မှာ လောကီရေးရာ ကိစ္စများသာ ဖြစ်သော်လည်း အချို့ဘာသာတရားတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ လောကုတ္တရာရေး / နောင်တမလွန်ဘဝရေးသာဖြစ်တယ် ။ ပန်းတိုင်ကို သွားတဲ့ လမ်းစဉ်များမှာ ဘာသာတရား တစ်ခု၌ပင် ဂိုဏ်းဂဏအလိုက် ကွဲပြားမှုများ ရှိနေတယ် ။ ဥပမာအနေနဲ့ ဂျူးဘာသာမှာ လမ်းရိုးအတိုင်း သွားလိုတဲ့ သူများနဲ့ လမ်းအသစ်အတိုင်း သွားလိုသူများဆိုပြီး ရှိကြတယ် ။ ခရစ်ယာန်မှာလဲ ထို့အတူပါပဲ ။ ပရိုတက်စတင်နဲ့ ရိုမန်ကက်သလစ် များ ကွဲပြားခြားနားနေကြပြန်တယ် ။ ပျောက်ကွယ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ ဘာသာများမှာ ရှေးခေတ်အီဂျစ် / ဘေဘီလုံနီးယား / ဂရိနဲ့ ရောမဘာသာများဖြစ်တယ် ။
အခုအချိန်ထိတိုင်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ဘာသာများကိုတော့ ဖေါ်ပြဖို့ မလိုလောက်တော့ဘူးထင်ပါတယ် ။ ရှေးခေတ် ဘာသာအများအပြားမှာ မျိုးနွယ်စု တစ်စုကသာ ကိုးကွယ်သော ဘာသာများ ဖြစ်ကြပါတယ် ။ မျိုးနွယ်စုတစ်စုရဲ့ ရိုးရာအစဉ်အလာ ဓလေ့ထုံးစံ ပူဇော် ပသမှုနဲ့ ယုံကြည်မှုများတာ ဖြစ်တက်တယ် ။ လူမျိုးငယ်စုများ ပေါင်းစုပြီး အမျိုးသား အသွင်သဏ္ဍာန် ပေါ်လာတဲ့အခါ အမျိုးသား ဘာသာတရားအဖြစ် ကူးပြောင်းလာတက်ပြန်တယ် ။ ရှေးခေတ် အီဂျစ် ဘေဘီလုံနီးယား နဲ့ ယခုခေတ် ရှင်တို ဘာသာတို့ဟာ လူမျိုးတစ်မျိုးကိုသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာမျိုးဖြစ်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ ဘာသာတရားဆိုတာ အကြောက်တရားကနေ စတင်ခဲ့ကြပြီး လူ့ ယဉ်ကျေးမှု သမိုင်းစာမျက်နှာသစ်ကြီးကို အလွန်ရှေးကျတဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေခေတ်ကတည်းက ဖွင့်လစ်နိုင်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။ ယခုမှ အထူးအဆန်းတစ်ခုတော့ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ သို့သော် ! ‪#‎htoohtoolay‬